Land for Sale in Dala - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Lands for Sale in Dala
Dala | Yangon Region
Ad Number S-8643854
ဓနုတ်မြစ်ပေါက် ၃.၆၂ ဧက ဓနုတ်ဘုရားရှေ့တည့်တည့်လမ်းမှ ဝင်ရမည်.. ၁ ဧက သိန်း ၅၅၀
Ad Number S-8634617
ကျူတောချောင် ၅၂၄ ကွင်း - ၃၆.၁၂ ဧက ကွင်းဝိုင်း-ကျူတောချောင်ရွာချင်းဆက်လမ်းပေါ်တွင် ပေ ၆၆၀...
Ad Number S-8634605
ဒလ-ဓနုတ်ကားလမ်းမေးတင် ၊ဒလမှ ဓနုတ်သို့သွားလျှင် ၁၀ မိုင် ၃ဖာလုံတွင် ၉.၇၄ ဧကရှိ...
3,409 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8634593
Dala Farmland 3.03 acres For Sale; 150 meters from the city; 1 km from the Dala bridge under construction. 2500L/acre; phone: 09-663067176
Ad Number S-8624783
Ad Number S-8595593
Ad Number S-8581214
SL3-002433, For Sales Land, Beside Dala-Twantay Road, Dala Tsp တြင္ ေျမကြက္ ေရာင္းရန္ရွိ သည္။
Ad Number S-8523765
Ad Number S-8523730
SL2-002432, For Sales Land, ဦးေအာင္ေဇယ် ၇လမ္း၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမကြက္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
Ad Number S-8523729